संसारमा सबैभन्दा लामो भाषा: पुरुषहरू बनाम महिलाहरू
ग्रहमा हरेक जीवित प्राणी व्यक्तिगत हो। यो दुवै मानिस र जनावरहरूमा लागू हुन्छ। Homo sapiens को भीडबाट बाहिर खडा गर्न थप अवसरहरू छन्। एक सजिलै र बिना बिना कठिनाई नाखो बन्दैछ, अर्को समयमा एक सय बर्गर खाउन सक्छ, र तेस्रोले विशाल कान वा संसारको सबैभन्दा लामो जीभमा गर्व गर्दछन्। मानिसहरू प्रमाणित गर्न र संसारमा आफ्नो विशिष्टता देखाउनका लागि, त्यहाँ धेरै शो र प्रतिस्पर्धाहरू छन्। रेकर्डको केवल गिनीस बुक भनेको के हो? यस वार्षिक बैठकले मानिस, विज्ञान, प्रविधि र प्रकृतिको दिमाग बोगी उपलब्धिहरूको संग्रह प्रस्तुत गर्दछ।
फिल्म समाप्त हुनेछ अघि भाषा
कहिलेकाँही तपाईंको विशेषता व्यक्तिगत विशेषताले शो व्यवसायको संसारमा पास हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, निक अफान्सेवको साथ के भयो। यसको उत्सव व्यावहारिक रूपमा संसारमा सबैभन्दा लामो भाषा हो। एक पटक युएस अमेरिकी युएसियन युनिभर्सिटी फिलीडेल्फिया क्षेत्रमा रहन एक पटक विश्वको साथ आफ्नो "सम्पत्ति" साझेदारी गर्ने निर्णय भयो। Nick Afanasyev जीभको लम्बाइ एक मिलिमिटर बिना9सेमी हुन्छ।
त्यसोभए जवान मानिसले एक सानो भिडियो लिनुभयो र यो YouTube मा राख्नुभयो। यस भिडियोमा, मुख्य "क्यारेक्टर" भाषा हो। यो शंकरले के गर्दैन? निक सजिलै आफ्नो चिन्ता चिन्ता, नाकमा छान्छिन्, कुनै कुन्नी बिना उनको कोहनी चाल्दैन र ... उनीहरूको आँखा टाँस्छन्। र अन्तिम, बाटोको रूपमा, यो बिंदु असंभव थियो जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। तर संसाधन अमेरिकी साबित भएको छ कि कसैले पनि आफ्नो क्षमताओं लाई कम गर्नु हुँदैन। छोटो समयको लागि "भिडियो" भिडियो एकदम धेरै व्यक्ति देख्यो। तिनीहरूमध्ये निकेलोडोन च्यानलका निर्माताहरू थिए। बिल्कुल अविश्वसनीय जवान मान्छे, र विशेष रूप देखि उनको भाषा, च्यानल को कर्मचारीहरु मा एक विशाल प्रभाव बनाइयो, र तिनीहरूले उनलाई श्रृंखला iCarly मा एक भूमिका प्रदान गरे।
ब्रिटिश रेकर्ड धारक
तर प्रसिद्ध वार्षिक गिनिस् बुकमा निक अफानसिसेवले मारेनन्। नामांकन "संसारमा सबैभन्दा लामो भाषा" पुरस्कारलाई फोग्ग अल्बियन स्टीफन टेलरको निवासीलाई दिइएको थियो। पहिलो रेकर्ड फिक्स गर्ने समयमा, उनको जिब्रोको लम्बाइ लगभग 98 मिमी थियो। केही समय पछि यो पुन: प्राप्त गर्ने निर्णय भयो, र न्यायाधीशहरूको आश्चर्य कस्तो थियो जब उनीहरूले उल्लेख गरे स्टेफेन शरीर5मिलिमिटरले बढ्यो! टेलर आफैले मजाकका रूपमा, यो मेटामोरफोसिसले विभिन्न टेलिभिजन शो र कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहभागिताको कारण हुन सक्छ। त्यहाँ यो महिमा र तिनीहरूका सकारात्मक छन्, ती थोपा नाजुक क्षणहरू: सबैलाई होइन, एक प्रसिद्ध व्यक्ति पनि, अभिनेत्री ब्रिगेट नील्सन (सिलभेस्टर स्टेलोनको पत्नी) चुम्बन गर्न प्रस्ताव गर्दछ। तर स्तिफनलाई यस सम्मानको साथ सम्मान गरिएको थियो। महिलाले यस्तो सोचिरहेको थियो कि यो एक भाषाको मालिकलाई चुम्बन गर्न के हो?
महिलाको आकर्षक सुविधा
यो उल्लेखनीय छ कि स्तिफन टेलर "संसारमा सबैभन्दा लामो भाषा" शीर्षकको स्वामी एक यूक्रेनी ग्रामीण थियो। दिइएको दिइएका शरीरको लम्बाइ 10.1 सेन्टिमिटर थियो। तथापि, न केवल पुरुषहरूले त्यस्ता विशेषतालाई घमन्ड गर्न सक्छन्। मानवताका कमजोर र सुन्दर आधा प्रतिनिधिहरूको बीचमा महिलाहरू पनि छन् जसले एक लामो जिब्रोको साथ झुक्याउँछन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकन च्यानल टापर। यस अन्धकार-पतले सुन्दरता क्यालिफोर्नियामा बस्छ। पहिलो नजरमा, प्यारा, मजेदार केटीमा केही असामान्य छैन। यद्यपि, मुस्कान पछि सबैभन्दा लामो भाषा लुकेको छ। केटीको फोटो, जहाँ आइसक्रीम लिन्छ, सम्पूर्ण संसार वरिपरि गए । विटामिनियस र मजाकहरूको ठूलो संख्याले च्यानलको ठेगानामा राख्यो। यद्यपि, यो यसको सुविधामा गर्व हुन्छ, जसको लम्बाइ 97.5 मिमी छ।
हाम्रा साना भाइहरू
निस्सन्देह, भाषा जनावरहरूमा पनि शरीरको भाग हो। कसले भन्यो कि सबैभन्दा लामो भाषा - एक व्यक्ति? मिठाई पेकिङेसी पिग्लियाले साबित गर्दछ। उनको जिब्रोको लम्बाइ 11.43 मिमी छ। यस सानो कुकुरको लागि धन्यवाद विश्व रेकर्डको वार्षिक संग्रहको पृष्ठमा देखा पर्यो, जुन गिनीस बुकको रेकर्ड हो।
यात्री Mikhail Stadukhin
राजनीतिज्ञ र डिप्लोट टोलस्टोय पेट्र अरेभिविच: जीवनी, गतिविधिका विशेषताहरू र रोचक तथ्यहरू
बसोबासहरूको अजीब नामहरू। उत्पत्तिको इतिहास
"रियाजान बिटुको विलम्बको कथा": एक छोटो सारांश। ऐतिहासिक साहित्य
सामूहिक खेती सोवियत कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको आधार हो
हिमशैल सलाद: कार्बोहाइड्रेट, क्यालोरी, लाभ
स्कूल बैग "Erich Krause" (Erich Krause): मोडेल समीक्षा
स्टोव र Fireplaces लागि ईटाहरु छनौट।
राशि प्रतीक र प्रतीकात्मक रूप को पौराणिक जरा
ओल्गा Voronet: प्रसिद्ध सोभियत र रूसी पप गायक को जीवनी र क्यारियर
स्याउ घरमा वी डी। यसलाई कसरी गरिन्छ?
सिम्फरोपोल मा क्याथरीन2स्मारक: दिग्गज मूर्तिकला को पुनरुद्धार
Prams Lonex: अवलोकन, प्रकार, समीक्षा
कहाँ र सिपी मशरूम कसरी प्रयोग गर्ने: तयारी र भण्डारण